समर्थकको यतिसम्म माया, रविलाई ‘म्युजिकल मेयर’ को उपमा ! [भिडियाेसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
समर्थकको यतिसम्म माया, रविलाई ‘म्युजिकल मेयर’ को उपमा ! [भिडियाेसहित]
काठमाडौं, मंसिर ७ । जारी ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ मा ‘टप ६’ का लागि बिहीबार प्रतिस्पर्धा भएको छ । आज (शुक्रबार) आइडलको मञ्चबाट एकजनाले विदा लिने छन् । बाँकी रहेका सातै प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुती ‘दमदार’ छ । उनीहरुको आवाजले नेपालीहरु मन्द्रमुग्द छन् । रत, नेपाल आइडलको चर्चा पनि उत्कृर्षमा छ ।
दिनहुँ नेपाल आइडलको प्रतिस्पर्धा रोचक बनिरहेको छ । रोचक बन्नुको कारण आइडल घोषित हुने दिन नजिकिदै छ । आइडलमा बाँकी प्रतिस्पर्धीका आआफ्नै प्रशंसक एवं समर्थक छन् । आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई ‘आइडल’ बनाउन समर्थक सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्इटर, भाइवर इत्यादि) अहिलेका सशक्त माध्यम हुन् ।
समर्थकले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई शिखर पुर्याउन विभिन्न उपाय अपनाउँदै प्रचार-प्रसार गरिरहेका छन् । यसैबीच, ‘नेपाल आइडल’ को ‘टप ७’ मा पुगेका रवि ओडलाई जिताउन प्रशंसक तथा समर्थकले उनलाई ‘आइडल’ बनाउन अभियान नै चलाएका छन् ।
देश तथा विदेशमा रविका ‘फ्यान’ धेरै छन् । उनको जादूमयी आवाजले कयौं समर्थक उनलाई ‘नेपाल आइडल’ बनाउन खुलेर साथ दिइरहेका छन् । आफ्नो मात्रै नभएर रविको प्रतिभाको कदर गर्दै साथ दिने व्यक्ति थुप्रै छन् ।
उनलाई हौसला एवं माथिल्लो स्थानमा पुर्याउन कतिपयले त ‘धनगढीका म्यूजिकल मेयर’ को उपमा नै दिइसकेका छन् । हुन त उनी धनगढीको मात्रै सिमीत नभई राष्ट्रकै गायक हुन् । यद्यपी, उनले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट ‘अडिसन’ दिएकाले समथर्कले यस्तो उपमा दिएको हुनसक्छ ।
बिहीबारको प्रस्तुतीमा पनि ‘आइडल’ को मञ्च वरिपरी बसेका समर्थकले रविलाई ‘धनगढीका म्यूजिकल मेयर’ भनेर पूरा समर्थन जनाइरहेका थिए । उनले ‘नाइ मलाई थाह छैन’ बोलको गीत गाइसकेपछि दर्शक दिर्घाबाट ‘वान्स मोर’ को चर्को आवाज आएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल आइडल रवि ओडसहित तीन प्रतिस्पर्धी अमेरिका जाने